Arimaha soo socda oo leysku raacay inay yihiin kuwa Dumarka ku qasba ama ku dadajiya Guurka. – Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Arimaha soo socda oo leysku raacay inay yihiin kuwa Dumarka ku qasba ama ku dadajiya Guurka.
Guurku ayaa ah Nimco allaah subxaanahu Watacaalaa uu ugu nimceeyay Ummada Muslimiinta ah ayaa waxa dhici kara indadka qarkood ay ku fududaadaan oo si tijaabo ah ay ku galaan guurka iyaga oo aan fikir sidaasi u ballaaran aan ka haysan Guurka.
Haddaba ku soo dowoow qodobada gabadha ku qasbi karo in ay guursato sida ugu dhaqsiyaha badan:-
(1) Iyada oo ku fikirta Ka faa’iideeyso da’daada oo guurso inta aad yartahay.
Haweenenka ayaa mararka qaar ku dag daga oo si indha la’aan ah u guursado iyaga oo ka baxsanaya in Tarenka guurka uu katago, oo kama fikiraan cidda ay nolasha la wadaagayaan, waxaana dhacda in ay goor dambe ka shalaayaan waliba goor xeero iyo fan dhaal kala dhaceen.
(2) Waa la guursadaa ee iska guurso ayaa gabdho farabadan haadaan uga dhaceen.
Mararka qaar Gabdhu waxa ay dareentaa maseer oo ay ka hinaasto saaxiibadeeda la eeyniga ah ee fursadu usaamaxdo guurka ,iyada oo dareenta in ay horumar ay ka sameeyeen xaaladda bulsho oo ay ku dhex noolyihiin iyaga oo ku fikira in ay qaadaan talaabooyin ay ku gaarin karaan asaagooda gabdhaha ah ee guurka uga hormaray.
Waxaa dhacda in Gabdhu ay ku fududaato guur oo ay si indha la’aan ah ku guursato ninka ugu horeeya ee kasoo horbaxa isla markaan ay la aqa gasho qof aysan ku qanacsaneen Nafsadeeda,hadafka ugu weeyn oo ay ka leedahay gabdha guurkaasina waxa uu noqonkaraa in ay ku gaarto asageed kaga hormaray guurka
3-Qoyska gabadha ay ka dhalatay oo cadaadis ku saaro in ay guursato.
Waxaa laga ma maarmaan ah in aan iska indha tirin Kaalinta qoyska ay ku leeyihiin Guurka Gabadha taa oo keenta in ladadajiyo aqal galka gabdha ,gabadha waa in waalidkeeda uu dajiyaa guri aamin ah ka hor inta waalidka uusan geeriyoonin.
Lkin waxaa jira Fahan qaldan oo qaar ka mid ah gabdhaha ay aamin sanyihiin taa oo ah in ay iyada xulato qofka ay dooneeyso hadduu doono ha ahaado mid aan u qalmin in uu mas’uul kaga noqdo nolasheeda.
4- Xiriir jeceel oo ay gabdhu ku fashilantay.
Gabadha oo ku fashilanta xiriir jeceel waxa uu ku keenaa in si dag dag ah ay guur isugu tuurto waana mid in farabadan ay ku taliyaan guur kaasi dag dagga ah si ay gabadha u hilmaamto guuldaradii ka soo wajahday xiriirka jaceel ee guul dareestay
5-Dano maaliyadeed oo gabadha lagu indha sarcaadiyo.
Indha tirira gabadha waxaa ka mid ah maalka oo lagu qarqiyo ,waana mid ka mid ah waxa gabadha ku qasba in ay la aqal gasho qof aan gayaan keeda ahayan ama aan geeyn sido kale waxyaabaha kale ee gadha ay ku kadsoonto ayaa waxaa ka mid ah dhal dhalaalka shakhsiga ama quruxdiisa ,waxaa ay ku sirmaan gabdhaha Dhal dhaaalka ,quruxda iyo dabacsanaanta xidigyada iyo imkaaniyaadka sare ee uu heesto qofka noocaasi ah.
Ugu danbeeyntii isma weeydiiyaan waxa ka dambeeya quruxda iyo dhal dhalaalka ,iyo waliba in ay jiraan ceebo farabadan oo u qarsoon qofkaasi waxaana lagu maah maahaa wax walba oo dhalaala Dahab ma aha.
Dhaqamada Dumarka Aay Lasoo Baxaan Guurka Kadib “Hubka Iyo Rassaasta Haweenka”.
KaLaFoGe May 16, 2013
Daawo Muuqaalka Wiil Soomaali Ah Oo Jirikaan Ama Caag 20 Litir Qaad ah Ku Qaaday Ilkihiisa Iyo Mucjiso Rabaani Ah.
KaLaFoGe February 8, 2015
Sababta Uu John Kerry Kulan Ka Dhacayey Qaramada Midoobey Ugu Soo Qaatay Inanta Uu Awoowga U Yahay
KaLaFoGe May 2, 2016